Akhriso: Wararkii ugu xiisaha badnaa ee Todobaadkan laga qoray Soomaaliya – Bandhiga
Akhriso: Wararkii ugu xiisaha badnaa ee Todobaadkan laga qoray Soomaaliya
Todobaad walba maalin kasta oo Jimco ah waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu waaweynaa ee ka dhaca dalka, Halkan waa warbaahinta Bandhiga Media.
La-wadaag asxaabta si ay kaga boqgtaan wararka ugu muhiimsanaa ee dalka.
Sabti,December 15, 2018: War-murtiyeedka heshiiskii dhexmaray dowladaha Soomaaliya iyo Eretria ayaa la soo saaray:
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka SoomaaliyaMudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo Madaxweynaha Eritrea MudaneIsaias Afwerki, waxay kulamo wadatashi oo labo maalmood so
cday (13-kii ilaa14-kii bisha Diseembar, 2018) ku yeesheen magaalada Muqdisho, Soomaaliya.
Sabti,December 15, 2018: Beesha Caalamka iyo Ururka Midowga Africa ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay xaaladdaBaydhabo ka taagneyd todobaadkii hore:
War saxafaadeed ay Dowladaha Caalamka iyo Ururadd wada-shaqeynta la leh Dowladda Federalka Soomaaliya soo saareen waxay ku sheegeen inay kawalaacsan yihiin dhacdooyinkii ka dhacay Dowlad-gobaleedka Koofur Galbeed Soomaaliya,waxayna Tacsi u direen geeridii Xildhibaankii ka tirsanaa Barlamaanka K/Galbeed iyo dadkii kale ee ku geeriyootay qalalaasha ka dhacay magaalladda Baydhabo.
Dhanka kale War qoraal ah oo kasoo baxayxafiiska ergayga gaarka ah ee MidowgaAfrika u qaabilsan Soomaaliya ayaa looga hadlay xiisada siyaasadeed ee kazoo cusboonaatay Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana lagu yiri” “Waxaan il gaar ah ku haynay xiisada siyaasadeed ee ka taagan KGS iyo soo xiritaankii Mukhtaar Rooboow, Waxaan AMISOM kula dardaarmaynaa in aynan ka qeyb noqon xiisadaasi siyaasadeed, waxaana rajaynayanaa in xiisadaasi ugu dambeyn la xaliyo”
Sabti,December 15, 2018: AMISOM ayaa sheegtay iney kabaxeyso Kuliyadda Jaale siyaad:
Howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa sheegay todobaadkan in Kulliyadda Jaalle Siyaad ee MagaaladaMuqdisho ay ku wareejinayaan Dowladda Soomaaliya.
Madaxa howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM oo booqasho ku tagay Kulliyadda Jaalle Siyaad ayaa sheegay in dayactir lagu sameynayo Kulliyadda kaddib ay ku wareejinayaan Ciidamada dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Francisco Caetano Madeira, waxa uu tilmaamay in Kulliyadda Jaalle Siyaad ay kaalin muhiim ah ka qaadatay howgalkii Al-shabaab looga saaray Magaalada Muqdisho.
Waxaa uu intaas ku daray in Ciidamada AMISOM ee ka guuraya Kulliyadda Jaalle Siyaad ay degi doonaan duleedka Muqdisho, islamarkaana Kulliyadda ay ku wareegayaan Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
Sabti,December 15, 2018: Gudoomiyaha Golaha Shacabka ayaa ka hadlay xariga MukhtaarRoobow:
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh C/Raxmaan oo Shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Muqdisho ayaa xukuumadda Soomaaliya ugu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku siideyso Mukhtaar Roobow oo Muqdisho ku xeran hadda.
Gudoomiye mursal ayaa sidoo kale ka tacsiyeeyay dadkii ku dhintay rabshadihii ka dhacay magaalada Baydhabo.
Sabti,December 15, 2018: Isgaarsiinta magaalada Baydhabo ayaa dib loo soo celiyay
Isgaarsiinta nuucyadeeda kala duwan ayaa dib ugu soo laabatay magaaladaBaydhabo ee xarunta maamulka Koofur Galbeed halkaa oo dhor saacadood ay ka maqneed.
Isgaarsiinta ayaa markii hore loo jaray si looga hor tago falal amni darro iyo dibadbaxayo abaabulan balse aysan taa hor joogsan dibadbaxyada oo sabtidii hore meelo kala duwa ka dhacay.
Sabti,December 15, 2018: Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa khudbad ka jeediyay shirka Doha Forum
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya,mudane Xasan Cali Khayre ayaa dalka Qatar uga qayb galay madasha sannadlaha eeDooxa Forum.
Axad,December 16, 2018: Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya ayaa la kulmay amiirka dalkaQatar:
Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya,mudane Xasan Cali Khayre oo ku sugan magaalada Dooxa ee dalka Qatar ayaa lakulmay Amiirka dalka Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani.
Labada mas’uul ayaa kawada hadalay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga laba geesoodka ah labada dal ee walaalaha ah.
Ra’iisul wasaare Khayre ayaa amiirka Qatar uga mahadceliyay soo dhawayntii ballaarnayd iyo marti soorka Dooxa loogu sameeyay wadfiga uu hoggaanayo.
Axad,December 16, 2018: Shirkadda Diyaaradaha Qatar Airways ayaa sheegtay in duulimaadyo toos ah Muqdisho ka bilaabidoonta:
Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaaladaMuqdisho ayaa marti-galinaya duulimaadyo toos ah oo heer caalami ah tan iyo wixii ka danbeeyay bur-burkii dowladda dhexe Soomaaliya.
Madaxa shirkadda iyo Ra’isul wasaaraha Soomaaliya ayaa arrintan waxey kaga wada hadleen magaalada Dooxa ee dalka Qatar.
Axad,December 16, 2018: Dowladda Soomaaliya ayaa xirtay xabsiga godka Jilicow:
Dowladda Soomaaliya ayaa gabi ahaanba kudhawaaqday in la xiray Xabsiga Godka Jilacow oo ku yaala magaalada Muqdisho.
Waxaana Godka Jilacow loo bixiyay Xarunta Academiyada Jilacow, sida uu sheegay Wasiirka Amniga Somaliya Maxamed Abuukar Isloow Ducaale iyo Wasiirka Cadaaladda Xasan Xuseen Xaaji Wasiirka Cadaalada.
Xabsiga ayaa ahaa goob aysan ka jirin wax cadaalad ah islamarkaana si aah loogu ciqaabi jiray dadka lagu xiro iyadoo inta badan lagu cabsi siin jiray dadka la soo qabto.
Axad,December 16, 2018: Wasiirka dib u dhiska guryeenta Xukuumadda FederalkaSoomaaliya ayaa iscasilay:
Wasiirka Howlaha Guud iyo dib u dhiska guryeenta XukuumaddaFederalka Soomaaliya Mudane Cabdi Fitaax Ibrahim Geseey ayaa iscasilay todobadkan.
Sababta rasmiga ah ee uu isku casilay ayaa lagu sheegayaa iney tahay faragelinta lagu hayo doorashada Koofur Galbeed iyo in Guddiga doorashada maamulkaasi ay tartanka ka reebeen Mukhtaar Roobow oo ku xiran magaalada Muqdisho.
Axad,December 16, 2018: Khudbad jeedinta musharaxiinta Koofur Galbeed ayaa kabilaabatay magaalada Baydhabo:
Magaalada Baydhabo waxaa khudbadaha musharaxiinta jeediyay saddex musharax oo maalintii Axadda ku qoraneyd .
Sidoo kale Guddiga doorashada madaxweynaha cusub ee KG ayaa magaalada Baydhabo kaga dhawaaqay in musharaxa Mukhtaar Roobow Cali laga reebay liiska Musharixiinta.
Musharixiinta isugu soo haray doorashada oo ilaa shan gaaraya ayaa khudbadahooda u jeedinaya Baarlamaanka Maamulka K/Galbeed, iyadoo kulankana uu gudoominayay Sii hayaha Madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamanka Maamulkaas C/qaadir Shariif Shiikhunaa, kuwa khudbadaha jeediyay ayaa kala ahaa: Aadan Maxamed Nuur(Saransoor), Xuseen Cusmaan Xuseen iyo Ibraahim Macalin Nuunow
Axad,December 16, 2018: Khilaafkii Gudoonka Golaha Shacabka ayaa la sheegay in laga heshiiyay:
Kulan saacado qaatay oo magaalada Muqdisho uga socday gudoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada Baarlamaanka FederalkaSoomaaliya ayaa ku soo dhamaaday isafgarad.
Intii uu kulanka socday waxaa laga wada hadlayay khilaafka u dhaxeeya Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo labadiisa ku xigeen oo arrimo dhowr ah iksu heystay.
Khilaafka ayaa waxa uu qarxay markii Gudoomiyaha golaha shacaba Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxman oo waxba kama jiraan ku tilmaamay kala diristii guddiga maaliyadda oo xukuumadda eedeeyay,oo ku xigeenadiisu arrinkaa ka hor yimaadeen.
Waxaa kaloo khilaafka uu sii xumaaday markii Gudoomiye Mursal uu qabtay Mooshin xilka looga qaadayo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federalka Soomaaliya.
Axad,December 16, 2018: Lacag ganaax ah oolagu xukumay Wasiir ku xigeenka Arimaha Dibadda Soomaaliya oo musuq lagueedeyay :
Maxkamada Gobolka Banaadir oo dhageysatay dacwadda loo heysto eedeysane Muqtaar Mahad Daa’uud,kaasi oo dhowaan lagu sooeedeeyay inuu ku kacay arrimo la xiriira ku tagrifal Hantida Qaranka.
Isniin,December 17, 2018: Doorashooyinka Somaliland ayaa lagu heshiiyay in dib loo dhigo:
Kulan Madaxtooyada Magaalada Hargeysa ku dhexmarayXubnaha mucaaridka ah ee Somaliland iyo xukuumadda Muuse Biixi Cabdi ayaa laisku afgartay in dib loo dhigo doorashada Golayaasha degaanka iyo Golahawakiillada Somaliland.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, Hoggaamiyayaasha Xisbiyada Ucid iyo Waddani, Faysal Cali Waraabe iyo C/Raxmaan Maxamed Cabdullahi Cirro ayey isku raaceen in labada doorasho oo ahayd in la qabto dhamaadka sanadkan in dib loo dhigay muddo sanad kale ah.
Isniin,December 17, 2018: Ra’isu lWasaaraha Soomaaliya ayaa magacaabay wasiirka howlaha guud iyo dib udhiska.
Ra’iisal wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa wareegto xafiiskiisa ka soo baxday u magacaabay Wasiirka Howlaha Guud iyo dib u dhiska dalka Mudane Cabdi Aadan Hoosow, waxaana xilkaasi iska casilay isla todobadkan sii dhamaanaya Cabdi Fitaax Ibrahim Geeseey.
Isniin,December 17, 2018: Guddiga Doorashooyinka Qaranka ayaan diiwaan geliyay xisbiyo cusub:
Xaflad diiwaan gelin ah oo Guddiga doorashooyinkamadaxa banana ku qabtay gudaha Madaxtooyada Soomaaliya waxaa lagu diiwaangeliyay ilaa Shan Xisbi.
Xisbiyada ayaa sidoo kale la gudoonsiiyay shahaadada aqoonsiga, waxaana ay kala yihiin: Xisbiga U Hiili Dadkaaga, xisibiga daryeelka Soomaaliyeed, xisbiga Dal dhis, xisbiga Himilo Qaran oo uu hogaaminayo Madaxweynihiihore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmad iyo xisbiga Samadoon.
Isniin,December 17, 2018: Madaxweynaha Jabuuti ayaa kulan la qaatay Ra’isul wasaare ku xigeenka dalka:
Ra’iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalkaSoomaaliya, mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa magaalada Djibouti kulakulmay madaxwaynaha dalka aan walaalaha nahay ee Djibouti, Ismaaciil CumarGeelle.
Ra’iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo madaxwayne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ka wada hadlay xariirka walaaltinimmo ee labada dawladood iyo labada shacab, arrimaha gobalka, iyo amniga.
Mudane Mahdi Maxamed Guuled ayaa madaxwaynaha Djibouti uga mahad-celiyey taageerada reer Djibouti la garab taaganyihiin shacabka iyo dawladda Soomaaliye.
Isniin,December 17, 2018: Haweeney Soomaaliyeed ayaa markii ugu horeysay la soo taagay maxkamad ku taala dalka Norway:
Haweenay 31 sano jir soomaali ah, kuna eedeysan iskudeyga kamid noqoshada ururka Daacish ayaa maanta lasoo taagay maxkamada Oslo.Haweeneydan oo hada mudo sanad ah ku xirneyd xabsiga ayaa waxaa horey garoonkadiyaaradaha Oslo uga qabtay hey´adda sirdoonka Norway ee PST, kadib markii ayxog ka heleen sirdoonka wadanka UK.
Haweeneydan soomaalida ah oo ah hooyo leh shan caruur ah, ayaa sida ay sheegeen xeer ilaalinta hey´adda PST-du,waxey xubin ka aheyd ururka Daacish, tan iyo bartamihii sanadkii 2016. Iyada oo wadan jirtay magaca «Umm Sayfullah». Waxeyna sidoo kale ku eedeysantahay inay kaalmo dhaqaale u dirtay ururka Daacish.
Isniin,December 17, 2018: Dowladda Denmark ayaa sheegtay in 1000 qof oo Soomaali ah kusoo celineysa dalka:
Sida lagu sheegay tirokoob kasoo baxay laanta agaasinka qoxootiga dalka Denmark, ilaa 1000 qof oo Soomaali ah ayay hey´addaas dib ugaceshatay magangalyada qoxootiga, kadib dib u qiimeyn ay ku sameysay baahidooda magangalyo.
Sababta ugu weyn ee kunkaas qof ee soomaalida ah ay ku lumiyeen magangalyadooda qoxootiga ayay hey´adaas ku sheegtay in Soomaaliya ay tahay hada dal nabad ah oo dib loogu noqon karo, aysana u baahneyn magangalyo.
Talaado, December 18, 2018: Ra’isul Wasaare Kheyre iyo Gudoomiye Mursal oo ka heshiiyay khilaafkii jiray
Guddoomiyaha Golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxman iyo Ra’isalwasaarahaXukuumadda Somaaliya Xasan Cali Kheyre oo xalay kulan ku yeeshay xarunta wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya ayaa waxa ay ka heshiiyiin muran siyaasadeed u dhaxeeyay maalmahan.
Xildhibaanno ka mid ah Golaha shacabka ayaa sheegay in kulanka labada mas’uul uu yimid kaddib wadahadal hoose oo maalmahan ay wadeen xubno ka mid ah Golaha shacabka.
Talaado,December 18, 2018: Dowladda Soomaaliyaayaa dalka ka mamnuucday hay’adda Sahan Reasrch:
Dowladda Soomaaliya oo war saxaafadeed soo saartay ayaa sheegtay in dalka laga mamnuucay iney ka howlgasho Hay’ada Sahan research.
Wasaaradda amniga ayaa sababta ku sheegtay arrimo la xirira amniga dalka, iyadoo qoraalka shaqo joojinta loo diray Deeq bixiyayaashaCalamka, Hay’adaha Qaramada Midoobe hoostaga iyo Hay’adaha samaafalka.
Sababaha loo cuskaday shaqo ka joojinta, ama looga shakiyay waxaa kamid ah iney ku saabsantahay; Amniga Qaranka, Xasiloonida iyo midnimada dalka.
Talaado,December 18, 2018: Dowladda Itoobiya ayaa qunsul cusub umagacowday dalka Itoobiya:
Dowladda Federaalka ahee Itoobiya ayaa Qunsul cusub u magacawday degaannada Somaliland kaddib markii dhawaan qunsulkii hore looga yeeray magaalada Addis ababa.
Qunsulka cusub ee Itoobiya u joogi doona Hargeysa waxaa lagu magacaaba Shamsudiin Amxed Rooble,waa Soomaali Itoobiyaan.
Waxaa uu horay ahaa danjiraha Itoobiya ee Kenya iyo Jabuuti,waxaa uu sidoo kale noqday xildhibaan, sidoo kale waxaa uu soo qabtay Wasiir ku xigeen.
Talaado,December 18, 2018: Kenya Airways ayaa sheegtay iney ka shaqeyndoonto Muqdisho muddo sanado ah kadib
Sharikadda diyaaradaha Dalka Kenya ee Kenya Airways , ayaa sheegtay in duuulimaadka diyaaradda ee Muqdisho iyo Nairobi inuu dib u billaaban doono.
Arrintan ayaa timid kadib duullimaadka Sharikaddan ee Muqdisho iyo Nairobi oo qorshuhu ahaa in uu billowdo 15kii BishiiNovember ee la soo dhaafay oo dib u dhac ku yimid xiligaa waxa ay Kenya Airwayssheegtay in is fahamwaa iyada iyodowladda Soomaaliya soo kala dhexgalay.
Agaasimaha Kenya Airways , Sebastian Mikosz, ayaa sheegay in ay hadda heshiis la gaareen sharikadda ALS oo ah sharikad laga leeyahay Kenya taas uu ruqsadda ceymiska siisa sharikadaha diyaaradaha ee Muqdisho iyo Nairobi.
Talaado,December 18, 2018: Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in $900Million ku maalgelineysa Soomaaliya:
Talaado, December 18, 2018: Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimo ee maamulkaasi.
Madaxweynaha maamulkaPuntland Cabdiewali Maxamed Cali Gaas oo waqtiga xilheyntiisa sii dhamaaneyso ayaa xaflad uu ku qabsaday magaalada Garoowe waxa uu shaaciyay hadal laga sugayaybalse ballan kabax ah.
Talaado, December 18, 2018: Wasaaradda Haweenka ayaa dhiseysa sharciga Qaranka Gudniinka Gabdhaha:
Wasiiradda Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqaha Aadanaha ee xukuumadda federalka Soomaaliya Deeqa Yaasiin Xaaji Yuusuf oo kulan la qaadatay xubno u dooda xuquuda aadanaha oo kasocda Beesha Caalamka iyo ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa waxaa looga hadlay arrimaha gudniinka.
Arbaco, December 19, 2018:Jaamacadda Carabta ayaa sheegtay in Soomaaliya ay ka taageereysa qorshaha horumarinta qaranka ee u degsan Soomaaliya.
Ururka Jaamacadda Carabta ayaa sheegay in uu dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ka taageerayo qorshaha horumarinta qaranka ee u degsan Soomaaliya.
Xoghaya guud ee Ururka Jaamacadda Carabta Axmed Abulqeyd oo la kulmay Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya ayaa waxaa uu sheegay in Ururka uu xoogga saarayo sidii loo taageeri lahaa dowladda Federaalka ah.
Axmed Abulqeyd oo la kulmay Wasiir C/Raxmaan Ducaale Beyle ayaa tilmaamay in Jamacadda Carabta ay ka go’atahay hirgelinta qorshaha horumarinta qaranka ee Soomaaliya.
Arbaco, December 19, 2018: Wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa Baydhabo u duulay
Wafdi ka socda Dowladda Federalka Soomaaliya oo kor joogtoka noqon doona Doorashada madaxtinimo ee Maamulka Koonfur Galbeed, ayaa goor dhaweyd ka ambabaxay Magaalada Muqdisho.
Wafdigan, ayaa waxaa hoggaaminaayo Wasiirka Arrimaha gudahaSomaliya Cabdi Maxamed Sabriye iyo Xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka ,kuwaasi oo goobjoog ka noqon doona doorashada Maanta la filaayo inay kadhacdo Baydhabo.
Xubnaha Wafdigaan ayaa goor dhaweyd ka ambabaxay Magaalada Muqdisho, waxayna ka dagi doonaan Magaalada Baydhabo, halkaasi oo ammaankeeda si wayn loo adkeeyay.
Arbaco, December 19, 2018: Ifrah Foundation iyo Wakiilka Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa kulan yeeshay:
Waxaa maanta magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay Ifrah Ahmed oo ah madaxa ururka Ifrah Foundation ee u dooda xuquuqda Haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan ka hortaga Gudniinka Fircooniga iyo xoghayaha gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Danjire Nicholas Haysom.
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray arrimaha xuquuql Insaanka iyo ka qeyb qaadashada dumarka ee Siyaasadda dalka.
Ifrah ayaa sheegtay in u qaabilsanaha QaramadaMidoobay Soomaaliya ay ka go’antahay taageeridda haweenka Soomaaliyeed.
Waxaa kaloo kulanka looga hadlay muhiimadda ay leedahay in la dhiso sharciga gudniinka gabdhaha oo hadda ay wado wasaaraddaHaweenka iyo arrimaha xuquuql Insaanka marwo deeqo Deeqo Yaasiin.
Arbaco, December 19, 2018: Cabdicasiis Lafa-gareen ayaa loo doortay madaxweynaha Koofur Galbeed Soomaaliya:
Guddiga doorashada maamulka Koofur Galbeed Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen uu yahyay madaxweynaha cusub ee Koofur Galbeed Soomaaliya.
Cabdicasiis ayaa helay codadka ugu badan ee ah 101 cod halka uu Aadan Maxamed Nuur Saransoor uu noqday musharaxa ku xiga
Arbaco, December 19, 2018:Hay’adda caalamiga ah ee IOM ayaa xafiiskeeda Nairobi u soo wareejisay Muqdisho:
Hay’adda socdaalka u qaabilsan Qaramada Midoobey ee loo soo gaabiyo IOM ayaa xafiiskeeda u soo wareejisay magaalada Muqdisho, kana soo wareegtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Khamiis, December 20, 2018Wasiirka Amniga oo tababar u soo xiray Saraakiil ka tirsan Ciidanka Booliska Soomaaliyeed:
Wasiirka Amniga gudaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Abuurkar Islow Ducaale ayaa tababar usoo xiray Saraakiil katirsan Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, kuwaasi oo tababar ku qaatay Xerada Tababarka ciidanka ee TurkSom.
Waxaa goobjoog ahaa Munaasabadda xiritaankaTababarka Taliyaha Ciidanka Boolislka Soomaaliyeed, taliye ku-xiggeenkaBooliska iyo Saraakiisha xerada TurkSom.
Khamiis, December 20, 2018: Madaxweyne Farmajo ayaa la dabaal dagay ciidanka Booliska Soomaaliyeed:
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ooka qayb-galay xuska sannad guurada 75aad ee ka soo wareegtay aasaaskii Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed ayaa hambalyo u diray saraakiisha,saraakiil-xigeennada, alifleyda, dableyda iyo dhammaan qeybaha kala duwan eeciidanka Booliiska Soomaaliyeed iyo qoysaskooda.
Khamiis, December 20, 2018: Gudoomiyaha Golaha Shacabka ayaa go’aan rasmi ah ka gaaray Mooshinka M/weyne Farmaajo:
War qoraal ah oo ka soobaxay xafiiska Guddoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ayaa lagu sheegay in laga laabtay mooshinkii laga keenay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmajao.
Gudoomiyaha golaha shacabka mudane Mursal oo warkan qoraalka ah soo saaray goor-dhow waxa uu ku sheegay in mooshinka lagu dhameeyey qaab wada-hadal islamarkaana xildhibaano badan ay ka laabteen.
Wararka qaar ayaa sheegaya in dad ku dhowguddoomiyaha baarlamanka ayaa sheegay inay jiraan heshiisyo hoose oo la iskuafgartay kuwaasi oo dhamaantood salka ku haya xilal siyaasadeed.